Wepamusoro 4 Gnu / Linux Distros yeVashandisi veMac | Linux Vakapindwa muropa
Wepamusoro 4 Gnu / Linux Distros yeVashandisi veMac
Vazhinji vashandisi vanoshandura yavo Macbook yelaptop ine Gnu / Linux kana kudzima MacOS voichinjira Gnu / linux. Chero zvazvingaitika, mushandisi weMac anogara achitsvaga kugoverwa kuri nyore kushandisa uye kunochengeta kutaridzika kwakafanana kunoratidzika kunoratidza maitiro eMacOS.
Uye kunyangwe zvakadaro Kugoverwa kweGnu / Linux kunozivikanwa nekugadzirisa kwakasimbaIchokwadi kuti kune zvimwe zvekugovera zvinotaridzika kunge MacOS kupfuura zvimwe. Neichi chikonzero isu tiri kuzokupa iwe Iwo mana Akanakisa Kugovera kweLinux Mac Vashandisi Vangashandisa pachinzvimbo cheMacOS.
5 Mhedziso pane izvi zvinogoverwa zvevashandisi veMac
Kugoverwa kunonyanya kufanana neMacOS kuri pasina mubvunzo Elementary OS. Yakavakwa paUbuntu uye ine yakasimba tsika, Elementary OS inotarisirwa kune avo vashandisi veMac vanoda kushandisa Linux. Desktop yake, Panther, yakavakirwa kuteedzera MacOS desktop uye parizvino arikutsvaga zvikumbiro kuti zvive zvega pakuparadzira sezvazviri kuitika paMacOS. Elementary OS unogona kuiwana kuburikidza Iyi link.
Kugoverwa uku kwave kwakabudirira kwazvo muna 2016 nekuda kwechitarisiko chayo uye desktop yayo inoshanda zvizere Divi redivi raBudgie rinotiyeuchidza nezveMacOS asi zvakasiyana neiyi, Solus haina dhoku nekutadza, chimwe chinhu chatinogona kugadzirisa tichitenda Plank. Imwe nzira kuna Solus ingangove Ubuntu Budgie, asi pakati pevaviri, yakatsiga uye yakasimba ndiSolus, sezvo imwe ichiri pasi pekuvandudzwa. Solus unogona kuzviwana kuburikidza Iyi link.
Kugoverwa uku kune zita rezita rekuti Ubuntu Mentolado. Haina kufanana zvakanyanya neMacOS, asi inodaro iri nyore dhizaini uye ine yakapusa menyu uye manejimendi manejimendi, seMacOS. Ichi ndicho chikonzero vazhinji vashandisi veMac vanosarudza Linux Mint pane kumwe kugovera. Linux Mint haina dhoku kana yakazara yakazara seMacOS asi inogona kuwedzerwa nyore. Linux Mint inowanikwa pa Iyi link.
Ubuntu ndiyo isingatombo fanane neMacOS. Asi kwaivewo iko kwekutanga kugovera uko MacBuntu yakavakirwa. MacBuntu ndeyekugadzirisa package, pamwe ne theme yedesktop, iyo inotibvumidza isu kuti tishandure iwo ese interface uye tiite kuti iite kunge MacOS. Kufanana kwavo kunoshamisa uye vashandisi vazhinji vanosarudza iyi mhinduro nekuti ndiyo yakafanana. Ubuntu unogona kuiwana mukati Iyi link.
Mhedziso pane izvi zvinogoverwa zvevashandisi veMac
Izvi zvinogoverwa ndezvepedyo kana zvakafanana nekutaridzika uye kunzwa kweMacOS, asi havazi ivo voga. Chero zvazvingaitika, kana ndaifanira kusarudza, pamwe sarudzo yakanakisa ichave Elementary OS, sezvo ichiyedza kusanganisa kwete chete chimiro cheApple asiwo huzivi hwayo, chimwe chinhu icho dzimwe kupihwa kupihwa kwausingapi, hongu pasina kubhadhara icho sezvazviri zvino nezvinoitwa neApple zvigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Wepamusoro 4 Gnu / Linux Distros yeVashandisi veMac
Uye PearOS? Iyo ubuntu ine MacOS ganda hahahaha
Rafa Hernandez akadaro
Pasina kunyatsonzwisisa kufarira kwekuita kuti Linux iratidzike seMac, ini ndinosuwa kugovera uko vazhinji vanogovana aesthetics neapuro: Deepin. Kunze kwechiChinese chepakutanga, unogona kuisa iro tafura muArch kana Manjaro (kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako). Iyo yakagadzikana, yakanaka uye yakapusa kubata kunyangwe kune mutsva. Shuwiro yakanakisa.
Pindura kuna Rafa Hernández
Didaz Zuva Rupit akadaro
Kutaura kuti Ubuntu ndiyo isingatombo fananei neMacOs, kana ichisanganisira kunyange menyu yepasirese seyakajairwa, ine machira, asi isingafunge nezve Deepin iri kutoenda pamusoro.
Pindura kuna Didaz Zuva Rupit
Yakanga isiri iyo yekutanga tafura Pantheon pane iyo Panther?
Bruno weiss akadaro
Apricity inotaridzika zvakanyanya seSolus, Ubuntu, uye mint.
Pindura Bruno Weiss
Mushure mekushandisa Ubuntu 14.04 uye 16.04 uye kuyedza mint uye yekutanga pane yangu macbook 6,2 ndinogona kutaura kuti zvakati omei kune newbie. Pakutanga bhuti, kupenya kudzora, webcam, simba manejimendi, ivo vanotora zvishoma fiddling (vharidzira iyo kernel kugadzirisa, semuenzaniso) ASI ZVAKANAKA ZVAKANAKA, ZVIMWE ZVINESIMBA, ZVINOGADZIRA UYE ZVINONAKA KUITIRA (kunyangwe mumifananidzo bvunzo) ZVANDINOKOSHA ZVESE ZUVA. (iko kutyisidzira iko zvino pamusoro pe desktop imacoooo)
Pindura kuna Alíen
Ini ndinonzwa ndisingagutsikane nehurombo uye kushomeka kwehukama hwechinyorwa, ini handinzwisise mabvumiro avanoita vanhu vane nheyo dzakaderera kudaro kuti vagadzire zvinyorwa Chokwadi deepin, ndiyo nzira inodiwa kubva pakutaridzika kwayo uye nekunzwa uye ini ndichiri kuona hapana chinhu chekubatana nezvakamboitika.
Maka ben akadaro
Deepin shamwari yangu, Tora nguva yekuongorora iyo distro. Inofanira kuve yekutanga pane yako runyorwa!
Pindura kuna Mark Ben
Kugoverwa kweGNU / Linux iyo isingatakure chiratidzo-appmenu haisi sarudzo yemushandisi weOxx nekuti vangarasikirwa nemamenyu ari pamusoro.
Maitiro ekuisa uye kumhanyisa Linux pane Android
Lubuntu 17.04 haizoenderana nePowerPC